TTSweet: ကျောင်းတုံးက အမှတ်တရ ...
Posted by T T Sweet at 9:46 PM
khin oo may October 11, 2010 at 1:28 AM
တောင်ငူသား October 11, 2010 at 1:39 AM
တခြား နာမည်ကျော်တွေထဲကကော အမတို့နဲ့ သိမီလိုက်သူများ ရှိခဲ့ရင် အမှတ်တရ ထပ်ရေးပါဦး။ ပြေတီဦးကတော့ အမတို့ထက် ငယ်မယ်ထင်တယ်။ ဥပမာ ဒွေး၊ မင်းဦး... စသည်ဖြင့်ပေါ့ အမရယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အလည်သက်သက်နဲ့ ကျောင်းကိစ္စရှိမှသာ သွားရတဲ့ နယ်နှင်ဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ နောက်ဆုံးပိုင်း နှစ်တွေကဆိုတော့ စီနီယာတွေ ရေးပြမှပဲ အလွမ်းပြေဖတ်ရတော့မှာပါ။
Thinzar October 11, 2010 at 2:13 AM
RIT ကျောင်းသူဖြစ်ခဲ့ရရင် တော်တော်ပျော်စရာကောင်းမှာလို့ အမြဲတွေးမိတယ်..
အမက စက်မှုကကိုးး ကျနော်က အမကို အီးစီကထင်နေတာ
အမရာ ရေးပါ.. လွမ်းလိုက်တာကျောင်းကို..
ရွှေရတုမှတ်တမ်း October 11, 2010 at 10:04 AM
မယ်ဆွိ တို့လဲ ကွင်း စာရင်းမှာပါတယ်မို့လား..
ဦးရှိမ့်တို့သာ မကွင်းနိုင်လို့ တည့်တည့်တိုးမိတာနေမှာ...
T T Sweet October 11, 2010 at 12:01 PM
ကိုကြီးကျောက်ရေ ... ကျောင်းတုံးက သူကကွင်းသွားပါတယ်။ ကျောင်းပြီးမှ မကွင်းနိူင်ပဲ တည့်တည့်တိုးတာပါခင်ညာ ...း)))
အပေါ်က အနောနိမတ်ညီမလေးတစ်ယောက်ပြောတဲ့ နာမည်က အတိအကျ မှန်နေလို့ ဖျက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ညာ။
ကိုတောင်ငူသားရေ ... တခြားသူတွေတော့ မှတ်မှတ်ရရ သိပ်မရှိလှပါဘူး။ မင်းဦးဆို ပထမနှစ်တုံးက သွားချောင်းခဲ့တဲ့သူက မင်းဦးအစစ်မဟုတ်ဘူးဗျာ။ နံမည်ကြီးနေတာ တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။
မြတ်နိူးရေ အစ်မက မသက်ဝေနဲ့ တူတူလေ။
စန္ဒကူး October 11, 2010 at 12:11 PM
ကောင်ညှင်းပေါင်း ပဲပြုပ်ပါ အတိုးနဲ့လာစားသွားတယ်..
tin min htet October 11, 2010 at 12:55 PM
တီဆွိ ကျောင်းတုန်းက နာမည်ကြီးတွေ အကြောင်းရေးရင် ကျွန်တော့်ကိုလည်း မချန်ခဲ့နဲ့လေ :P
မှတ်မိတာတခုက ကျွန်တော်တို့ တုန်းက ကျောင်းမှာ တူးတူး၊ ဒွေး၊ ဘုံးဘုံ၊ သန်းတိုးအောင် စသည်ဖြင့် ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကန်တင်းမှာ လူအဝိုင်းဆုံးက ကိုတိုးကြီးတို့ တခါတလေ လာထိုင်ကြတဲ့ အခါပဲ။
စုချစ် October 11, 2010 at 4:13 PM
ကိုကိုထက်... ပြောသာ ဟုတ်သား....ကျောင်းတုန်းက နာမည်ကြီး စာရေးဆရာမ ကဗျာဆရာမ ချောတောတာ ပေါတောတော လေးတွေလဲ ထဲ့ပြောအုံးမှပေါ့လို့... အာဟိ...
ဒါထက် စကားစပ်လို့... မင်းဦးကို ၁နှစ်မှီလိုက်တယ်...
အဲဒီ မင်းဦးကို မမြင်ချင် အဆုံးလေနော်... အတန်းပြောင်းတဲ့အချိန်.... သူတို့ ဖိုင်နယ် အတန်ူးက အဆင်း တို့တွေက အ၀င်... ရင်ဘတ်ကြီးမြှင့် ခေါင်းကြီးမတ်ပြီး အမြဲနေတဲ့သူပေါ့... မှတ်မိနေတာ... သူက အ၀ါရောင်ရှပ်လက်ပြတ်ကို အမြဲဝတ်တယ်... ရုပ်ကတော့ အားလုံးကြားမှာ ပေါ်လွင်သားးး
ကိုယ်လို နတုံးကတော့ သူ့ကို မင်းသားမှန်းမသိတော့ ပြေးရင်းလွှားရင်း ၀င်တောင် တိုက်မိသေးတယ်... ဟိဟိ...
ဖိုးတုတ် October 11, 2010 at 6:17 PM
ဓါတုဗေဒလက်တွေ.လုပ်တဲ့ ကျွန်တော်အဖွဲ.မှာ ကျွန်တော်က test tube ဆေး ၊ ဗီကာခွက်ဆေးတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ် ၊ တိုက်ထွေရှင်းလား လုံးဝမလုပ်တတ်ဖူး ၊ ပြီးမှသူငယ်ချင်းဆီကတွက်ထားတာကူးချ ၊ tutorial ဆိုရင်ကူးချ နဲ. ပျော်စရာကြီးပေါ့
ကျွန်တော်တို.လက်ထက် ၁၉၈၂-၈၃ တက္ကသိုလ်မှာ Queen က သိပ်ခေတ်မစားတော့ပါ ၊ ဇတ်မင်းသား မိုးမင်းတော့တွေ.ဖူးတယ် သချာင်္ကထင်တယ် သန္တာနေ၀င်း(သချာင်္)၊ ဟေမာနေ၀င်း (သမိုင်း)က ကျွန်တော်ထက် ၁တန်း ငယ်တယ်
အမရဲ့သမီးပန်းချီပုံ (Hair Style ) အရ လွယ်အိတ်အပြာရောင်နဲ. က ဒေါ်တီတီဆွိပဲဖြစ်ရမယ်
susu October 11, 2010 at 10:47 PM
မဆွိတို့ အာအိုင်တီ က‌ကျောင်းသား‌တွေအားအားရှိကျမတို့အီကိုဖက်
အာအိုင်တီကကွင်း‌တွေကိုသွားငမ်းတာ‌ ကျောင်းထဲဝင်ဝင်ချင်းဘဲ‌အီကိုက‌ကောင်မ‌လေး‌တွေဘာလာရှုပ်တာလဲဆြိုပီးတပြုံကီးလိုက်လာလို့ ကွင်းကိုလဲ မငမ်းခဲ့ရဘူး၊သြဘာလမ်းကိုလဲမ‌လျှောက်ခဲ့ရဘူး....။မဆွိက‌ကျောင်းအ‌ကြောင်း‌တွေ‌ရေး‌တော့လွမ်းလိုက်တာ...။
သက်ဝေ October 12, 2010 at 12:32 AM
ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး တယောက်ထည်း အတွေးထဲမှာ စကားတွေ အများကြီး ပြောနေမိတယ်... လွမ်းစရာနော်...
ဓါတ်ပုံထဲက သူငယ်ချင်းနဲ့ အဆက်အသွယ်ရရင် ပြောပြလိုက်ပါ... သတိရနေပါတယ်လို့...း))
ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့က မဆွီတီနဲ့ အတူတူရိုက်ထားတဲ့ နှစ်ယောက်တွဲပုံလေး အိမ်ကို ပြန်မှာလိုက်အုံးမယ်... မှတ်မိသလောက်က ဆွိက အစိမ်းရောင်လေး ဝတ်ထားတယ်ထင်တယ်.. ဟုတ်လားဟင်...
sorry ma ma yay.....you was my teacher.you will be always my teacher.onceateacher alwaysateacher ဆိုသမို့ လား။မမ ပုံမြင်လိုက်ရတော့ အရမ်းဝမ်းသာသွားလို့ ပါ။ ဆောရီးပါ ဆရာမ။နောက်မဖြစ် စေရပါဘူး။:))))
၉၈ EC ကျောင်းသားတဦး October 12, 2010 at 3:59 PM
RIT ဆိုတာ... အာတဲ့နေရာမှာ..အိုင်တို့က.တော့(ပ်)ပဲ..လို့လဲကြားဖူးတယ်။
ဲသြဘာလမ်း၊ မေတ္တာပေါင်းကူး၊ နွေးအေး၊ စိုးမြတ်ကျော်၊
Table Tennis ကစားခုံလေးနှစ်ခုပဲရှိတဲ့... MCR....
T T Sweet October 12, 2010 at 10:57 PM
ကိုထက်ရေ ... ဟုတ်ပ ကဗျာဆရာကြီးနာမည်ထည့်ရေးဖို့ ကျန်သွားတယ် ... နောက်တစ်ခန်းကျရင် အဲလေ နောက်တစ်ခါရေးရင် ဇာတ်ရံခန်းလောက်ကတော့ ပါအောင်ရေးပေးပါမယ်။ ကြက်ဥ၀ယ်တဲ့ အခန်းတို့ ဘာတို့ ...း))
သူနယ်ချင်း ကြီးတော်ကလဲ ကဗျာဆရာမ မြူ ... ဆိုလား .... နာမည်ကြီးပဲကို ... စာရင်း တို့ထားလိုက်မယ်....
မှားတယ်ဗျ။ ပုံထဲက အကြေကောက်ကောက်ထားတာ။ အဲဒီတုံးက အရမ်းခေတ်စားခဲ့တာလေ။
ဟေမာ့ထက်တောင်ကြီးတယ်ဆိုတော့ မီးမီး တစ်ခုပဲပြောလိုက်မယ်။ မီးမီးကို အစ်မလို့ ခေါ်နဲ့ဂျာ။ ဒါပဲ ...း))
စုစုရေ ဟုတ်တယ်။ အတန်းထဲက သူငယ်ချင်းကောင်လေးတွေလဲ အီကိုသူတွေနဲ့ ငြိတာ အများကြီးပဲ။ အားနေ လှိုင်ဘက်ပဲ သွားနေကြတာကိုး။ ကျောင်းကို အီကိုသူတွေ လာရင်လဲ သိပ်သိသာတာ။ မိန်းခလေးနဲတော့ ကျောင်းက ချောချောလှလှတွေဆို သူတို့က အားလုံးသိပြီးသားကိုး။ ကျောင်းလာရင် အစခံရပြီသာ မှတ်တော့။
အန်တီသက်ဝေ ... အတိတ်ကို လွမ်းသွားတယ်နဲ့တူတယ်နော်။ ရေးပါဦး ကျောင်းအကြောင်း ပို့စ်လေးတွေ။ အန်တီသက်ဝေရေးရင် အရမ်းဖတ်ကောင်းမှာ။
ခေါင်န်နူးတို့ အဖွဲ့ထဲကလားဟင်။ အားလုံးကို သတိရပါတယ်။ မှတ်မိပါတယ်။ ခုလိုတွေ့လိုက်တော့ အရမ်းဝမ်းသာတာပဲ။ စီဘောက်မှာ အီးမေးလေးရေးထားတယ်။ စာရေးပါဦးနော်။
၉၈ က EC ကျောင်းသားကတော့ ပိုလွမ်းအောင် လုပ်နေပြန်ပါပြီဗျာ။ ဆရာကြီးတွေကို ကန်တော့ပွဲတိုင်းနီးပါး ကန်တော့ဖြစ်ပါတယ်။
Rita October 12, 2010 at 11:41 PM
ကိုပေါ October 13, 2010 at 2:28 AM
အန်တီဆွိရေးတာဖတ်ပြီး ကျနော်လည်း ကျောင်းကို သတိရသွားပြီ။ တပို့စ်လောက်တော့ ရေးဦးမှ။
ဖိုးတုတ် October 13, 2010 at 12:52 PM
RIT ကျောင်းသားတွေက လှိုင် ၊ ပင်မ တို.က ကျောင်းသူတွေကိုလာပြီး ပိုးပန်းတာလည်း မပြောနဲ.လေ ၊ အမှန်ပြောရရင် RIT ၊ Geology တို.က ကျောင်းသူတွေက မချောဖူးဗျို. ဒါပေမဲ့ စာတော်တာကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ် ၊ တကယ်ချောတာက Eco, Zoology, Botany တို.က ကျောင်းသူတွေက တကယ်ချောတာ ၊ ဒါပေမဲ့ မဆွိတို. မသက်ဝေတို.က Eco သူတွေနဲ.အပြိုင်ချောပုံပေါ်ပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို.ကျောင်းတက်တုန်းက ဆီချက်တစ်ပွဲ ၂ကျပ်ခွဲကိုတော့ တကယ့်ကိုလွမ်းတယ်ဗျို. အမလို.ခေါ်တာက လေးစားသမူနဲ.ခေါ်တာပါဗျာ ကျွန်တော်ကလည်း ကိုယ့်အသက်ကို ကိုယ်ကြေငြာလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ် ဒီကြားထဲ ဟိုအတန်းမှာ စာမေးပွဲကျလိုက် ဒီအတန်းမှာစာမေးပွဲကျတဲ့ နှစ်တွေမပါသေးဖူးဗျို. ပြောရင်းပြောရင်းနဲ.ပိုပြီးလို.တောင်အသက်ကြီးသွားပြီ
Sonata Cantata October 13, 2010 at 2:00 PM
သက်ဝေ October 14, 2010 at 1:33 AM
ကျောင်းတက်တုန်းကအကြောင်းတွေ ရေးဖို့ကို စိတ်ထဲမှာတော့ အမြဲစဉ်းစားနေတာပဲ... ချသာ မရေးဖြစ်သေးတာ...း))
Anonymous October 14, 2010 at 2:09 AM
အဆောင်သူတွေအကြောင်း၊ ကျောင်းအကြောင်း ဆိုရင်သိပ်ဖတ်ချင်တာ။ ကိုယ်တိုင်လည်းကျောင်းသူကျောင်းသားဘ၀မှာ သိပ်ပျော်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကျမအတွက် ဘ၀မှာ အပူအပင်မရှိ အလွတ်လပ်အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်လို့လည်း ဆိုနိုင်တယ်။ အဲဒီတုန်းကအတွေ့အကြုံဇာတ်လမ်းလေးတွေရေးချင်ပေမယ့် ခုထိမရေးဖြစ်သေးဘူး။ သူများတွေရေးတာပဲ လိုက်ဖတ်တယ်။ ဒါကြောင့် မဆွိ များများရေးပါ။ လာဖတ်မယ်။ :)
ကျောင်းတုန်းက အကြောင်းလေးရေးထားတာဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းတာဘဲ မမရာ ထပ်ရေးပါဦးနော်
အမရဲ.သူငယ်ချင်း အဆောင် ကွင်းန် (beauty queen )ကိုတော. သိတယ်။ အမ ဘယ်သူလဲဆိုတာတော. ပုံဖော်လို.မရသေးဘူး။ တနေ.နေတော. သိမှာပါ။ ပျင်းတိုင်း လာဖတ်နေတယ် အမရေ.။
Moe Cho Thinn October 16, 2010 at 10:24 AM
ကျောင်းတုန်းက အကြောင်းတွေ ရေးပါအုံးမမ။ ကိုယ့်ကျောင်းအကြောင်း မဟုတ်ပေမဲ့ ကျောင်းအကြောင်းဆိုရင် ဖတ်ရတာ အလိုလို ပျော်မိတာပဲ။
အဲဒီတုန်းက သူငယ်ချင်းဆိုတာလဲ ဘယ်သူငယ်ချင်းနဲ့မှ မတူ။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ပျော်ရတယ် ဆိုတာလဲ ဘယ်အပျော်နဲ့မှ မတူ။
အဲဒီအကြောင်းတွေ လွမ်းမိတယ်ဆိုတာလဲ ဘယ်အလွမ်းနဲ့မှ မတူပါဘူးနော်..
(အပေါ်က ဇီကိုကိုကြီး၊ Geology က မိန်းကလေးတွေ မချောဘူး ပြောလို့ ကြိတ်ရှိုက်သွားတယ် အဟဲ..)
ဖိုးတုတ် October 16, 2010 at 2:26 PM
အမရေ ရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါ တိုက်ဆိုင်မူရှိလျင် ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ ကျွန်တော်တို.ကျောင်းတက်တဲ့နှစ်ပိုင်းမှာ Geology မှာ ကျောင်းသူသိပ်မရှိဖူး ၊ ကျွန်တော့်မှာ Geology က သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ် ကျွန်တော်က တစ်ခါတစ်လေ ဒဂုံဆောင်မှာသွားအိပ် ဖဲကစားနဲ. တော်တော်ပျော်ဖို. ကောင်းတာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဆို စာမေးပွဲကျ အဆောင်ပြုတ်လို. ၈မိုင်ကအဆောင်မှာနေရတဲ့အထိပဲဗျို. ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအထိလိုက်ပြီးအားပေးတာဗျို. အပြင်ဆောင်တွေမှာညဘက် ဂစ်တာတီး သီချင်းဆိုကြတယ် တစ်ချို. ဂစ်တာတီး၊ သီချင်းဆိုတဲ့သူတွေကို အဆောင်သူတွေက လက်ဘက်သုတ်၊ ဂျင်းသုတ်၊ ရေနွေးကြမ်းတို.လာပေးတာကြားဖူးတယ် ကျွန်တော်တို.အဖွဲ.က သီချင်းစပြီးဆိုတာနဲ. သူတို.ရဲ့ အဆောင်ပြတင်းပေါက်တွေကို ပိတ်လိုက်တာပဲဗျို.
T T Sweet October 16, 2010 at 11:56 PM
ပြန်လာဖတ်တဲ့ ရီတာ၊ အန်တီသက်ဝေ၊ မြတ်နိူး၊ မသီတာတို့အားလုံး အခုလို အားပေးတာ အရမ်းအားရှိတယ်။ ကျေးဇူးလဲ အထူးတင်ပါတယ်။
ကိုပေါ တစ်ပို့်စ်လောက် ရေးပါဦးဂျာ ... ရယ်ရအောင်ရေးနော်။ စောင့်ဖတ်နေမယ်။
မချိုသင်းပြောတာ သိပ်မှန်တယ်။ အဲဒီတုံးက လွတ်လပ်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဘ၀ကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မရတော့ဘူး။ ခုလိုလာအားပေးကြတော့ အဆောင်တုံးက သောင်းကျန်းခဲ့ကြတာလေးတွေ နောက်ရေးဖို့အားရှိသွားတယ်။ ဇွတ်ပဲနော် ...း)
ကိုဇီ နောက်အေးဆေးကျရင် အဆောင်အကြောင်းရေးဦးမှာ ... ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတွေ ဂစ်တာလာတီးရင်တော့ လက်ဖက်သုတ် ပို့ကြပါတယ်။
Moe Cho Thinn October 17, 2010 at 4:18 AM
ဟုတ်..၊ တိုက်ဆိုင်မှုရှိပေမဲ့ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ် ကိုဇီ။ :)
သီချင်းဆိုတာတော့ အင်မတန် အောင်မြင်ပုံရတယ်။ ကောင်မလေးတွေက အခန်းထဲမှာ ဇိမ်နဲ့ နားထောင်ချင်လို့ ဖြစ်မှာပါလေ..
ဆူးသစ် October 17, 2010 at 3:57 PM
ဖိုးတုတ် October 17, 2010 at 11:27 PM
မဆွိရေ အဆောင်အကြောင်းရေးပါဦး အားပေးနေမယ် ၊ ကျောင်းသားဘ၀ကတကယ်ပျော်ဖို.ကောင်းတာ နောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဆို ခပ်ဝေးဝေးမှာ သွားတက်ကြရတာ ၊
မမိုးချိုသင်းရေ Geology ဦးစောဖေ ကို မှီသေးလား ကျွန်တော်ပြောတဲ့အမည်က မှန်ရဲ့လားမသိဖူး ၊ အရပ်ရှည်ရှည် အမီနာဘာဂျမ်းနဲ. ခပ်ဆင်ဆင် ဆရာလေ
Moe Cho Thinn October 21, 2010 at 9:34 AM
စီနီယာအကြီးစားကြီး ထင်တယ်။ မီးမီးတို့ သင်ရဘူး။ :D
ဖိုးတုတ် October 25, 2010 at 1:07 AM
မဆွိပို.စ်ရဲ့ နောက်ဆုံးစာပိုဒ် နောက်ဆုံးစာကြောင်းက မော်ဒယ်လည်းခုတော့တကယ့်ကို မယ်တော်ကြီး ဖြစ်သွားပြီထင်ပါ့